Myanmar: Saxafiyiinta Reuters oo ku guuldarreystay racfaan - Worldnews.com
Laba saxafi oo u shaqeeya wakaalada wararka Reuters oo ku xiran dalka Myanmar, ayaa maanta ku guuldarreystay racfaan ay ka qaateen xabsi 7 sana ah oo ay horay loogu xakumay. ...
HARGEYSA, Somaliland - Hogaamiyaasha Xisbiyada degaanada Somaliland ayaa mowqifyo kala duwan waxay ka qaateen wadahadalka dowlada Federaalka ee Soomaaliya oo uu maamulka...
Dibadbaxayaal ka soo jeeda Maamul-gobaleedka Cafarta ee Itoobiya ayaa toddobaadkan xidhay Waddada halbawlaha ah ee isku xidha Ethiopia iyo Jabuuti,. Jidkan ayaa ah jidka...
Qaran News 2019-01-16
Wararka ka imanaya Puntlamd ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taal tuuladda Af-urur ee gobolka Bari uu dhaawac ka soo...
Sharci cusub oo laga dhaqangelinayo waddanka Sucuudi Carabiya ayaa waxaa lagu wadaa in haweenka dalkaasi ay xaq u yeeshaan inay ogaadaan furriinkooda. Laga bilaabo Axadda,...
Milatariga dalka Gabon ayaa maanta qaaday isku day afgambi oo ka dhan ah dowladda dalkaas. Saraakiisha milatariga ayaa qabsaday raadiyaha qaranka Gabon ee magaalada caasimadda ah ee Libreville, aroortii maanta oo isniin ah. Kelly Ondo Obiang ayaa raadiyaha ka sheegay in khudbad uu dhowaan raadiyaha ka jeediyey madaxweyne Cali Bongo “ay sii xoojisay tuhunka...
MUQDISHO, Somalia - Laba xidigle katirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Kumbud) oo heystay inuu dil bareer ah u geystay Marxuum Dayax Iimaan Xasan 21-ka bishii September, 2018, dilkaasi oo ka dhacay aga-gaarka Seybiyaano degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa soo qabtay Eedeysanaha, waxaana lagu wareejiyay Hey’adaha...
Gabadha kaliye ee ka dhex muuqata xildhibaannada Puntland
Waxaa xilalka si rasmi ah loogu dhaariyay xildhibaanada cusub ee maamulka Puntland kaddib markii shalay lagu dhawaaqay mudaneyaasha ay soo xuleen guddiga xallinta khilaafaadka. Xildhibaannada oo ay tiradoodu gaareyso 66 ayaa laga soo kala xulay deegaanada kala duwan ee uu ka kooban yahay maamul goboleedka Puntland. Nimco Cabdi Caarshe, ayaa ah haweeneyda kaliya ee ka dhex...
Dowladda Somalia iyo hay\_'adaha samafalka oo dalbaday in ka badan 1 billion oo gargaar ah
MUQDISHO, Somalia - Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hay’adaha gargaarka ee waddanka ka shaqeeya maanta waxa ay ku dhawaaqeen Qorshaha ka Falcelinta Baahiyaha Bini’aadamnimada ee 2019. Dowladda iyo Hay’adahu ayaa hoosta ka xarriiqay baahida loo qabo deeq degdeg ah si howlaha gurmadka loo sii wado. Qorshaha maanta la shaaciyay waxa lagu codsaday $1.08 bilyan si caawinaad...
Sheekh Maxamed Sh. Ibraahim Kenyaawi ayaa maanta oo jimce ah magaalada Muqdisho ku qabtay muxaadaro uu ciwaan uga dhigay 'Cafi walaalkaa', waxaana ka qeyb galay kumannaan ruux oo isugu tagtay garoonka ciyaaraha ee Koonis. Muxaadaradan oo maalmahanba dadweynaha lagu ogeysiinayay baraha xiriirka bulshada ayuu sheekhu diiradda ku saaray mowduuca iscafinta oo loo arkay mid si weyn...